Ogaden News Agency (ONA) – Xaqnimada Halganka hubaysan ee ka socda Ogadenya – By Sharezad F Gaas
Xaqnimada Halganka hubaysan ee ka socda Ogadenya – By Sharezad F Gaas
Maqaalkan xiisaha leh oo ku qoran afka Ingriisiga -akhri- The Legitimacy of the Armed Struggle in Ogaden, waxay marwo Sharezad F. Gaas ku bilowday maqaalkeeda qiimaha badan inay dood dheer la gashay qaar sheegta inay ka mid ahaan jireen taageerayaasha ONLF, hadase ku dooda inay ka soo horjeedaan dagaalka hubaysan ee ka socda Ogadenya si gumaysiga looga xoreeyo.
Waxayna sheegtay qoraaga in kooxdan doodooda ay ku saleeyaan ereyada ah, aan tijaabino hab kale, sida nabad in aan ku doono hadafka aan raadinayno.
Hasa ahaatee markaan hordhigo waaqica jira iyo in aanay suurtagal ahayn xataa xuquuqda asaasiga ah ee aadanaha in sidaa lagu gaadhi karo, iskaba daa xoriyade waxay ku jawaabayaan bay tidhi Sharezad; ” Ma aynaan tijaabinin istraatiijiyadaa hadda ka hore maan tijaabino hadda”. Waase been arintaa, sababtoo ah bay tidhi Sharezad; ONLF 1994 ayay tijaabisay markay ka qayb qaadatay doorashadii sanadkaa, waxayna kala kulantay darsin adag oo lama iloobaan ah.
Dood caqligal ah ma’aha waxay raadinayaan kooxdan waxayna diyaar u yihiin inay dhabanka kale u duwaan marka uu cadawga dharbaaxo. Maadaama ay faraha kala bexeen halganka, waxay rabaan waa is-dhiibid oo si kale loo dhahayo.
Waxay tidhi qoraaga maqaalka, Mararka qaarkood anigoo ku kajamaya ayaan ku idhaahdaa, maadaama aad ogolaateen nabadda, ordoo ka codsada Itobiya inay joojiso xabsiga iyo jidh-dilka iyo kufsiga iyo laynta shacabka. Jawaabta ay ku siinayaana waa; Intuu halgan hubaysan ka socdo Ogadenya waxba arintaa kama qaban karno. Nasiibdaradooda, ma haystaan wax damaanad ah in xad-gudubyadaa ay Itobiya joojinayso xataa haddii ay ONLF hubka dhigaan.
Waxaan aamnisanahay bay tidhi Sharezad, in xad-gudubyada Itobiya ay sii kordhayaan oy ka sii darnaanayaan hadii la’is dhiibo, oo kuwa buuralayda dagan la soo dajinayo dhulkeena hodanka ah ee dihin, oo shidaalka ay la soo baxayaan ka dibna ciidankooda sii xoogaysanayo oo aan tabar dambe loo helaynin. In aan ka dibna ku dambaynayno daawadayaal aamusan oo aan lahayn cod iyo awood toona.
Waxaan xasuusin lahaa kuwa iska dhigaya inay yihiin ciidanka asluubta, in tixgalinta akhlaaqda wanaagsan lagu guulaysan karo un marka lala xaalayo dad aadaab leh ama uu jiro nidaam dhawraya xuuuqda iyo asluubta wanaagsan oo aan la mid ahayn kuwan dhiiga dadka u haliilaya sida Meles Zinawi iyo gacan yarihiisa Cabdi iley. Sidee buu qof arka dhiiga shacabka Ogadenya ee ka hooraya gacmaha labadaa nin uu ugu dhiiran karaa inuu su’aal ka keeno sababta ay ONLF ay qoriga u qaaday say u baabi’iso cadaalada daradaa?
Kuwa ONLF eedeeya ee wadadaa maray waxay jecelyihiin inay doodooda ku soo daraan mabda’ii Gandhi ee ku dhisnaa halgan-Gacan qaad la’aan ah (Non Violent)- inuu xal u noqon karo mushkiladeena. Waxay aad u buun-buuniyaan ‘nabad’ iyo ‘horumar’ iyagoo ka doorbidaya ‘cadaalada’ iyo ‘xoriyada’.
Waxay ahaan lahayd guul aad u macaan oo u dhib yar hadaan xoriyadeena ku heleyno in aan sidii dhaq-dhaqaaqii xuquuqda dadka madawga ah ee Mareykanka aan ku heesno ‘we shall overcome, some day’ (maalin umbaan guulaysan doonaa), oo intaan gacmaha is-qabsano oon isruxno aan gitaarka qaraacno. Yaan jecalyn inuu wadadaa sahalka ah u maro gobanimadiisa? Hadii ONLF ay aqoonsi iyo ixtiraam ugu heleyso dadkeena hab nabadeed, ma’ayna qaadeen wadadan dheer ee dhibka badan. Waxay sheegtay qoraaga in horay loo soo tijaaibyay arintan 1994kii, oo waxyaaba badan lagala kulmay oo laga faa’idaystay.
Qofkasta wuu rabi lahaa inuu hadafkiisa ku gaadho si nabad ah. Ilowse waxaan ahay qof ogsoon waaqica jira. Dadka laga doonayo Itobiya in ayna gacan qaadin waa kuwa laga tira badan yahay, waa kuwa la cadaadiyo oo la uusmiirto, waa kuwa lagu xad-gudbo oo maalin walba la kulma cadaalad daradaa.
Ugu dambaynta waxay marwo Sharezad soo qaadatay mufakirkii siyaasiga ahaa Mr. Thomas Paine markuu tilmaamayay dhibka loo maro xoriyadda. Waxaana ka mid ahaa hadalada Thomas Paine, waxaan ku helno si raqiis ah si sahal ah ayuu nugu dhaafi. Waxa walba qiimaha uu leeyahay waxay ku xidhan tahay dhibkaad u marto. Ilaahay qiimaha xoriyadda wuxuu ka dhigay mid aad u sareysa, maadaama ay tahay xoriyadda shay qaali ah .. What we obtain too cheap, we esteem too lightly: it is dearness only that gives everything its value. Heaven knows how to put a proper price upon its goods; and it would be strange indeed if so celestial an article as freedom should not be highly rated.”
Waxay ku soo gunaanaday maqaalkeeda marwo Sharezad; waxaa leeyahay maya cadaalad darada. Waxaan leeyahay maya cadaadiska. Waxaan leeyahay haa xoriyadda, cadaaladda, sharafta iyo hanka. Xooga lagu difaacayo xoriyadda ayaa ka awood badan xooga ka socda gacan-ku-dhiiglaha. Taariikhda ayaa maalin warami doonto, maalintaana ma noqon doonto taariikh aan jirin oo Adisababa lagu barto. Waxay noqon doontaa taariikh ka madaxbanaan gumaysiga iyo adeegayaashiisa. Taariikh ku dhisan sharaf iyo hanweyni.
Xigmadii ay sheegeen Thomas paine iyo kacaan-yahankii kale u dhaga nuglaada oo ogolaada in aanay jirin wada sahlan oo gobanimo lagu gaadho. Ogadenya ha xorowdo.